ससुरा कु-ट्ने, श्रीमान बुजो हालेर कु`ट्नु भन्दै भिडियो बनाउने !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Hot News/ससुरा कु-ट्ने, श्रीमान बुजो हालेर कु`ट्नु भन्दै भिडियो बनाउने !!!
ससुरा कु-ट्ने, श्रीमान बुजो हालेर कु`ट्नु भन्दै भिडियो बनाउने !!!
काठमाडौँ – सामाजिक सं`जालमा एक महिला माथि चरम उ-त्पीडन भइरहेको भिडियो देखिएको छ। उक्त भिडि`योमा एक महिलालाई एक पुरुषले कु-ट्दै गरेको देखिएको छ। बताइए अनुसार, उक्त भिडियो अछाम मंगल`सेनको हो। भिडियोमा महिलालाई कु-ट्ने व्यक्ति महिलाका ससुरा रहेका बताइएको छ।
एक महिला भुइँमा बसिरहेकी देखिन्छिन्। एक पुरुष गालि गर्दै ती महिला माथि बेल्टले कु-टिरहेका देखिन्छन्। बे-ल्टले हान्दा ती महिला सहन सक्दिनन् र रुन थाल्छिन्। ती पुरुष त्यतिमा मात्र रोकिँदैनन्। गा-ली गर्दै भुत्ल्या-उँदै ती महिलालाई थप या-तना दिन्छन्।
यस्तो अत्या-चार भइर`हँदा त्यहाँ अर्की एक महिला पिट्ने पुरु`षलाई केहि शान्त गराउन खोजि रहेका देखिन्छिन्। यस्तै त्यहाँ अर्का एक व्यक्तिको पनि उपस्थिति छ। जो, भिडियो बनाइरहेका छन्। भिडियो बना`उने ती व्यक्ति मुख`मा बुजो हाल्न भनि`रहेका छन्।
भिडियो सामाजिक संजालमा
सामाजिक संजालमा देखिएको उक्त भिडियो धेरै व्यक्तिहरुले पोस्ट गरेका हुन्। सामाजिक संजालमा भिडियोसँगै पोस्ट गरिएको जानकारी अनुसार भिडियो अछामको मंगलसेनको हो। पिटा-इखाने महिला बुहारी हुन् भने पि-ट्ने व्यक्ति ससुरा हुन्। यस्तै भिडियो खिच्ने व्यक्ति प्र-ताडित महिलाका श्रीमान हुन्।
अछामको मंगलसेनको घट`ना!
कुट्ने ससुरा रे भिड्यो गर्ने यी महिलाकै श्रीमान रे!
तुरन्त अहिलेको अहिले पत्ता लगाएर नगरपालिका लाई खबर गरि बाँधेर प्रहरीलाई बुझाई दिनुहोला!!@Hello_Sarkaar @NepalPoliceHQ pic.twitter.com/rGKengzjdH
— मलिका 🔥 (@malikaagrgne) July 6, 2020
बिगुल न्युज बाट साभार गरिएको
लकडाउन छिट्टै अन्त्य हुँदैन : प्रधानमन्त्री
१९ बर्षिया युवाती ‘मन्दिर नखुले अनिष्ट हुन्छ’ भन्दै यसरी ढ’लिन्, दुर्गा मन्दिरमा भयो यस्तो अचम्म (भिडियो हेर्नुस्)